Steel vangapiwa kurongedza Plastic Baling Wire - China Ningbo Judin Special Monofilament
Steel vangapiwa kurongedza Plastic Baling Wire
Wooden vangapiwa Apex Plastic Baling Wire
Plastic vangapiwa kurongedza Plastic Baling Wire
Yakanaka RDF Bailing
Available mune bespoke urefu uye mwero hukuru
RDF, kana Ramba pacharo Fuel, anoshandisa zvemichina inobereka simba kubva tsvina kuti kukodzera kuti zvetsika marara. Vachiziva kudiwa imwe baling waya kuti zvakakodzera RDF, isu akakurukura chigadzirwa chiri akakodzera baling dongo nokuda incineration zvinangwa.
Kana baling uye strapping chikukutu matongo nokuda incineration, tsika simbi baling waya anofanira kubviswa pamberi pomoto kwacho kunotanga. Ichi basa nyanyisa uye kudhura.
Our itsva JUDIN Plastic Wire bedzi makasimbiswa uye kugadzirwa nevanhu Judin anogona kupiswa panguva incineration muitiro nokupa calorific ukoshi.
Length pa coils: mamita 13000
Weight pa mita: 0,018 makirogiramu
Divi pamusoro Roll: φ 550 X 270mm
Tensile zororo rimwe pakureba: 5000 N
Tensile zororo panguva denderedzwa pamwe fundo: 4800 N
Elongation pane zororo rimwe pakureba: 15%
Elongation pa zororo pamwe fundo: 9%
Bales zvinogona akatakura kuti yamavira zvakazara akaputirwa pasina kupindira izvo yekudyidzana kuponesa nguva uye mari nokuvandudza kugadzira hurongwa.
Akapa muna 13000 Meter Gwenzi, rairema makirogiramu 235 chete, izvo yakaenzana anenge 750 makirogiramu hwendarira waya. Naizvozvo kana yakagadzirirwa kuti RDF / SRF Baler pamwe proprietary inosimbisa mapuranga (izvo dziripo arayire) nokurera uye basa mari akatorwa kuchinjana Gwenzi iri yekudyidzana akaderedzwa, ndicho zvinobatsira kuti Operatives.
Mumwe Reel kuchaita yemanyorero zvibereko 2800 Bales (kwakavakirwa Bale hukuru pamusoro 1.2m X 1M X 1M) uye achaponesa kukosha yakawanda nguva Operatives. The Judin Plastic Wire ane rikkovia tisawirirane yakaenzana yakaderera tensile simbi waya uye akatsiga / akasimba kushandiswa.
Kushandiswa JUDIN Plastic Wire negates ari marangirwo zvino kuzviuru ne ruzhinji EU incinerators kuti dzosa simbi waya kubva chamatare yavo, saka kure kubereka mutengo nemari.
Clients uchishandisa JUDIN Plastic Wire angazarura mimwe nzvimbo / mikana ironge zvinhu zvavo.
Previous: Wooden vangapiwa Apex Plastic Baling Wire
Inflammable 10 Madzimabo Square Baling Wire
Inflammable Metal vangapiwa Baling Wire
Metal vangapiwa Baling Wire
Kuzvigadzira Patsva Baling Wire
Kuzvigadzira Patsva Plastic Baling Wire